Madheshvani : The voice of Madhesh - नेपालगन्जमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स सञ्चालन
नेपालगन्जमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स सञ्चालन
दिनेश ठाकुर, नेपालगञ्ज,२६ पुस । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, नेपालगन्ज शाखाको एक समारोहका बीच नेपालगन्ज उप महानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणाले रिबन काटेर उद्घाटन गरेका छन् ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, कम्पनीका संचालक तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष खेमराज लामिछानेको अध्यक्षतामा तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अजय कुमार टण्डनको बिशेष अतिथिमा कम्पनीका सहायक महा प्रबन्धक राजु पौडेलले स्वागत मन्तब्य ब्यक्त गर्दै कम्पनीको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
देशका सफल उद्योगी ब्यवसायीहरु, बैंकर्स तथा गैर आवासीय नेपालीहरुद्वारा यस कम्पनीको प्रवर्धन गरिएको छ साथै दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रुं १ अरब ५० करोड, पूँजी १ अरब र चुक्ता पूँजी रु. ७० करोड रहेका छ ।